Cali Cabdalla Saalax Oo Yaman lagu dilay. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
On Dec 4, 2017 365 0
Madaxweynihii hore ee dalka Yaman Cali Cabdalla Saalax ayaa maanta lagu dilay dalka Yaman, kadib markii uu ku dhacay weerar kamiin ah oo ay u dhigeen malleeshiyaad Xuuthiyiin ah.
Isaga iyo tiro kamid ah mas’uuliyiinta xisbigiisa oo marayay meel 40 Km ka fog magaalada Sancaa ee caasimadda ah ayaa la dilay Cali Cabdalla Saalax, waxaana kolonyada uu la socoday joojiyay malleeshiyaad katirsan Xuuthiyiinta, kuwaas oo markaas kadib toogtay.
Wuxuu ku socoday magaalada Sanxaan oo ah halka uu ku dhashey, kadib markii maalmihii tagay dagaallo ay ka soconayeen magaalada Sancaa oo u dhexeeya ciidamada Cali Cabdalla Saalax iyo kuwa Xuuthiyiinta.
Malleeshiyaadka Xuuthiyiinta ayaa shaaciyay iney ka takhaluseen ” madixii sharta iyo fitnada” sida laga baahiyay tvga Al-Masiira ee ku hadla afka Xuuthiyiinta.
Sawirro laga baahiyay tvga waxaa lagu arkayaa Cali Cabdalla Saalax oo madaxa ay xabad kaga taallo islamarkaana meyd ah.
Xuuthiyiinta ayaa saacado kahor waxay qarxiyeen guriga uu Cali Cabdaalla Saalax ka deganaa magaalada Sancaa, iyagoona sheegay in qaraxaas uu ku dhintay, balse arinta sugan waxay tahay in Cali lagu dilay kamiin ka dhacay meel 40 Km ka fog magaalada Sancaa.